रवीन्द्र मिश्रको कडा प्रश्न : " के राष्ट्रपति 'ओली गुट'का नेता हुन् ?" - VOICE OF NEPAL
१९ असार २०७७, शुक्रबार ०४:३१
# Rabindra Mishra
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकी छिन्। सभामुख र प्रतिपक्षी दलसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै अहिले आलोचना पाि भइरहेको छ । यसैबीच साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले के राष्ट्रपति ओली गुटका नेता हुन् ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले राष्ट्रपति ओलीलाई संकटबाट बचाउने साधन राष्ट्रपति नभएका पनि बताएका छन् । राष्ट्रपतिले ओली गुटका नेताको जस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने पनि बताएका छन् ।
उनले भनेका छन् – ‘के राष्ट्रपति ‘ओली गुट’का नेता हुन्? होइनन् भने बारम्बार राष्ट्रपतिले ओली गुटका नेताको जस्तो व्यवहार गर्न मिल्छ? राष्ट्रपति गणतन्त्रका गहना हुन्। राष्ट्रपति संविधानका पालक र रक्षक हुन्। ओलीलाई संकटबाट बचाउने साधन होइनन्। सिँगो गणतन्त्रको खिल्ली नउडाऊँ।’
के राष्ट्रपति 'ओली गुट'का नेता हुन्?
होइनन् भने बारम्बार राष्ट्रपतिले ओली गुटका नेताको जस्तो व्यवहार गर्न मिल्छ? राष्ट्रपति गणतन्त्रका गहना हुन्। राष्ट्रपति संविधानका पालक र रक्षक हुन्। ओलीलाई संकटबाट बचाउने साधन होइनन्। सिँगो गणतन्त्रको खिल्ली नउडाऊँ।